Ethiopia oo Iibinaysa Todoba Wakaaladood oo Dawladu Leedahay si ay Lacag Ugu Hesho Mashaariicda. – Rasaasa News
Jijiga, Mar 30, 2012 [ras] – Dawlada Ethiopia oo ogolaatay in ay qandaraas ku bixiso todoba wakaaladood oo ay dawladu leedahaya, qiima dhan 2.1 billion Bir oo u dhiganta [$121million], waana qayb ka mida qorshe ay dawladu ku doonayso in ay wakaaladaha dawliga ah kaga dhigto kuwo dad gaari yeeshaan saddexda sano ee soo socta.
Ethiopia waa wadamada uu dhaqaaluhu gacanta ugu jiro xukuumada, waxaana uu dhaqaalaheedu galay wadamada dhaqlahoodu sida xooga leh u korayo. Waxay damacsan tahay dawladu in ay iibiso 40 wakaaladood oo ay dawladu leedahay oo ay ka mid yihiin dhawr wakaaladood oo waaweyn, sida warshada khamriga iyo Hoteelo waaweyn.
Wakaalada maamusha shirkadaha gaarka iyo kuwa dawlada ayaa ogolaatay in ay ku bixiso 860 million Birr ah qandaraas ka yimid shirkada MIDROC, oo ah mid leh beeraha ugu waawayn Ethiopia Uper Awasha Agro-Industry Enterprise, sida uu sheegay afhayeenka wakaalada Wondafrash Asefa.
MIDROC Ethiopia, waxaa leh billioneerka Sacuudiaga Mohamed Al Amoudi oo ka mid dadka ugu taajirsan aduunka sida uu qoray Journalka Forbes Magazine. Shirkadaha kale ee Al Amoudi waxaa ka mid ah Horizon Plantation Plc, National Mining Corporation iyo Sa,udi Star Agricultural Development. Al Amoudi waxaa uu hore ugu guulaystay qandaraas afar wakaaladood oo kale oo isugaynta qiimaha lacagtoodu tahay 463 million [$26.7 million] sida uu sheegay Wondafrash.
Shirkada Al Amoud waxaa kale oo ay la xidhiidhaa qaybaha Beeraha, Cabitaanka, dhismaha, daabacaada, dharka iyo gaadiidka. Xiligan waxaa aad u soo jiidanaya shirkada beeraha marka la barbar dhigo kuwa kale.
Sanadkii hore waxay dawaladu iibisay warshadihii ugu dambeeyay ee khamriga Bedele, Harar iyo Meta Abo oo ay ka iibisay Heineken iyo Diageo qiima lacageed oo dhan $388.3 million
Shanta ugu Wayn
Ethiopia waxay rajaynaysaa in isugaynta wax soo saarkeeda guduhu [gross domestic products GDP] in uu kobco in ka badan 11% sanad walba ilaa iyo 2014, meesha ay hayda lacagta aduunku saadaalisay in kobaca Ethiopia noqon doono 7.5% sandkan 5.5% sanadka dambe.
Si la mid dalalka Afrika, Ethiopia waxay ka dhawaajinaysaa in ay horumarinayso mashaariicda dhismaha guud iyo maalgalinta si uu dhaqaalaheedu u noqdo mid tartami kara, waxaa kale oo qorshaha ugu jira in malaayin dollar ay galinayso mashaariida dhalinta tamarta si kor loogu qaado awooda tamarta.
Dhaqaale aqoontu waxay leeyihiin, dawladu way awooda in ay lacago u hesho qorshaha horumarineed, iyada oo ka iibinaysa dad gaar ah shanta shirkadood ee ugu waaweyn dawlada. Sida Ethiopian Airlines, Shirkada maraakiibta Ethiopia, Shirkada Isgaadhsiinta Ethiopia, shirkada Caymiska Ethiopia iyo Bank ganacsiga ee Ethiopia.
Kooxda wax baadha ee Access Capital oo saldhigoodu yahay Ethiopai waxay ku sheegeen warbixinta eegata dhaqaalha ” kaliya raacida qorshe balaadhan oo hatida gaar loogu yeelanayo ayey Ethiopia ku gaadhi kartaa dhamaystirka wax badan ujeedooyinkeeda.”
Iibka shanta shirkadood waxay abuur karaan $7.7 billion, marka 81 wakaaladood oo dadka laga gado laga heli karo $9.6 billion sida ay tidhi kooxda AC.
Raysal wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi ayaa ku celceliyey go,aan ah in gaar loo yeesho baank iyo Isgaadhsiinta Ethiopia, in kasta oo uu cadaadis kaga imanay deeq bixiyaasha galbeedka in uu sidaas yeelo.
Dhawr shirkadood oo muhiim ah oo ah qaybaha kala duwan waxay baaqi ku ahaan doonaan gacamaha dawlada, sida wakaalada hawlaha Marakiibta Ethiopia iyo 11 wakaaladood oo kale.
17 Ethiopian oo Lagu Xidhay Namanga